Wasiir Goodax Barre oo u jawaaby ardayda Puntland – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wasiir Goodax Barre oo u jawaaby ardayda Puntland
Allhadaaftimo February 9, 2020 Uncategorized
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax-barre oo mar kale ka hadlay khilaafka waxbarasho ee Puntland iyo dowladda federaalka ayaa sidoo kale u jawaabay qaar kamid ah ardayda deegaanada Puntland oo cabasho muujiyey.
Ardaydaas oo dhigta mid kamid ah Iskuulada ugu weyn magaalada Boosaaso ayaa waxaa ay dalbadeen in aan la siyaasadeyn shahaadadooda, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay galaan Imtixaanka dowladda iskuna kalsoon yihiin.
“Ka wasaarad ahaan, waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno ardey kasto oo Soomaaliyeed, si u helo waxbarasho dhameystiran, islamarana u qaato shahaado cadeyneysa waxa uu bartay, Ardeyda wax ka barta deegannada Puntland, waxay la siman yihiin kuwa kale ee ku nool gobollada dalka ayuu yiri” Wasiir Goodax Barre.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka jawaabayey muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey oo ay cabasho ku muujinayeen qaar kamid ah ardayda deegaanada Puntland.
Waxaa sii xoogeysanaya khilaafka dhinaca Waxbaarshada ah ee u dhaxeeya Wasaaradaha Waxbarashada ee Dowladda Soomaaliya iyo Puntland.
Previous Suldaan saciid Suldaan cabdisalan oo saaka Xafiisyadooda ku booqday Safiirada UK iyo Europe e Somaliya
Next Wasiirka Amniga Jubaland Oo Ka Waramay Xadhigii Xukumada Federalku Ugaysatay.